Ka Faa’iideyso Fadliga Bisha Barakaysan Ee Ramadaan ! | Himilo Media Group
Fadliga Tobanka danbe ee Ramadaan wuxuu leeyahay fadliyo iyo waxyaalo ku gaar ah, waxa ka mid ah inuu Nebigu SCW u dadaali jirey si aanu u dadaalin labaatankii ka horreeyey, Xaaskiisa Caa’isha ayaa tidhi RC: “Nebigu SCW wuxuu ahaa mid dadaala Tobanka danbe si aanu u dadaali jirin inta kale”. Waxay kale oo tidhi RC: “Wuxuu Nebigu ahaa mid isku dara Salaad iyo seexasho, labaatanka [hore], marka ay tobanka [danbe] noqoto wuu dadaali jirey guntigana wuu giijisan jirey”.
Xadiisyadan kor ku xusani waxay ina tusayaan in Nebigu SCW uu Tobanka danbe Cibaado ku soo jeedi jirey, Cibaadadaasi waxay isugu jirtey, Salaad la tukado, Qur’aan la akhriyo, Ducooyin iyo Xuska alle, waxa muuqata in aan Nebigu SCW Habeenkii seexan jirin Tobankan danbe isagoo raadinaya fadliga Tobankan Habeen ee danbe leeyihiin, kuwaas oo Habeenka qiimaha badan ee Qadrigu ku jiro.
Waxyaalaha Nebigu SCW Tobankan danbe samayn jirey waxa ka mid ah inuu Masaajidka ku ictikaafi jirey, ictikaafka iyo axkaamtiisa si gaar ah ayaan uga hadli doonaa insha Allaah. Qofka Muslimka ah waxa la gudboon inuu cimriga ka faa’iidaysto isagoo waqtiyada qiimaha badan illaalinaya, waayo Tobankan Habeen ee Ramadaan, wuxuu Nebigu SCW sheegay Qofka Bishan khayrkeeda laga af qabto in khayrkii oo dhan laga af qabtay, sidaa darteed waa in Qofku ka faa’iideysto mowsimada Cibaadadu qiimaha dheeraadka ah leedahay sida Tobankan Habeen ee Ramadaan ugu danbeeya, waxaad arkaysaa dad badan oo aan kala ogeyn inay Tobankii Ramadaan ugu fadliga badnaa ku jiraan iyo in kale, waayo waanay fahansanayn waxa laga macaashayo, Illaahay diinta ha ina fahansiiyo. Aamiin. 2.
Laylatul Qadri waa Habeen fadli badan oo ku jira Tobanka danbe ee Ramadaan gaar ahaan Habeenada tiradu is dheertahay sida 21,23,25,27,29.
Habeenkan waxa Illaahay kaga war bixiyey Suurada Al-Qadari wuxuuna yidhi:“Waxaanu soo dejiney [Qur’aanka] Habeen wax la qadaro, ama Habeen qiima badan, ma garanay waxa Habeenka Qadrigu yahay? Habeenka Qadrigu wuxuu ka fadli badan yahay kun Bilood [83 sanno & 4billood] Malaa’iigta ayaa soo degta [Habeenkaa] iyo Malaku Jibriil. [Dhulka ayey marayaan iyagoo booqanaya oo diiwaan gelinaya Dadka Cibaadaysanaya] waa Habeen nabadgelyo ilaa waagu beryo, ama addoomaha ayey salaamayaan ilaa waagu ka beryo”.
Sharafta Habeenkan waxa inagaga filan in Illaahay Qur’aanka soo dejiyey, Qur’aankaas oo Adduunyada oo dhan hannuun iyo Raxmad u ah, ciddii Illaahay waafajiyo. Sharafteeda waxa ka mid ah in Illaahay ku sheegay Habeen barakaysan : Waxaan soo dejiney [Qur’aanka] Habeen barakaysan”.
Habeenkan waxa la inoo jideeyey in aan la nimaadno Salaad Habeenkii la tukado iyo Cibaado, Qofkii Habeenkan Qadriga Salaatu layl tukada isagoo rumaysan balanqaadka Illaahay, Ajrina kaga sugaya waxa loo qorayaa Ajri ka badan kun Billood sida Aayadu inoo sheegtay, waxaana loo dhaafayaa denbigiisii hore. “Qofkii istaaga Habeenka Qadriga isagoo rumaysan Illaahayna Ajri kaga sugaya, waxa loo dhaafaa Denbigiisii hore”.
Cullimada Selefka qaarkood waxay yidhaahdeen Qofkan waxa loo qorayaa, Soon iyo Salaad ka badan kun Billood inuu la yimi sidaa waxa laga sheegaa imaamka weyn ee Shaafici Alle ha u naxariistee. Haddaba in Habeen keliya oo aad dhawr Saacadood Salaatu layl tukatey laguugu qoro Ajri ka badan dhawr iyo Sideetan Sanno Qof Illaahay caabudayey oo aan mar keliya caasiyin, waa qiime intee leeg? Illaahay ayuun baa qiyaasi kara!
Waa Habeen dhamaan wixii Illaahay Sannadkaa fulinayo loo qaybiyo malaa’iikta si ay ugu hawl galaan, sida Qur’aanku inoo timaamay, Habeenkan ayaa malaa’iikta lagu wareejiyaa shaqadii ay Sannadkan fulin lahaayeen, hadday tahay cidda dhimanaysa, cidda dhalanaysa, cidda qani noqonaysa, cidda faqiir noqonaysa, cidda liibaanaysa, cidda khasaaraysa iwm. Sidaa ayaa Aayadan Qur’aanka ahi inoo sheegaysaa: Habeenkan dhexdiisa ayaa la qaybiyaa amar kasta oo Illaahay xukumay”.
Waa Habeen malaa’iikta Raxmadu Samada ka soo degto, waxay Habeenkaas oo dhan wareegayaan dhulka iyagoo diiwaan gelinaya Dadka Cibaadada gudanayaa, Malaa’iiktan waxa hormuud u ah Malaku Jibriil, iyagoo Dhulka usoo degaya khayr iyo bushaarona wada. Qofkii Habeenkaa malaa’iiktu ugu timaado isagoo khayr iyo Cibaado ku soo jeeda ama samaynaya insha Allaah waxay u diiwaan gelin doonaan inuu Habeenkaa khayrkisii la kulmay. Malaa’iiktu waxay hawshan soo gabagabeeyaan ilaa waaga Subaxu ka dilaaco oo Salaada Subax la tukado, sida Suuradu sheegtay.
Waxa Axaadiistu inoo sheegtay inuu Habeenkani ku jiro, Tobanka Habeen ee Ramadaan ugu danbeeya, gaar ahaan Habeenada tiradu is dheer tahay ee 21,23,25,27.29.
Sidaa waxa inoo sheegaya Xadiiska Nebigu SCW yidhi: “Rasuulku wuxuu yidhi: ku dadaala Habeenka Qadriga Tobanka danbe ee Ramadaan ee kinsiga ah [aan isku buuxin]”.
Waxa jira Riwaayado si gaar ah u sii sheegay Toddobada Habeen ee danbe ee Ramadaan sida Xadiiska:
“Rasuulku wuxuu yidhi: waxaan arkaa in Riyadiinii isku raacday Toddobada danbe, Qofkii ku dadaalayaa ha ku dadaalo Toddobada danbe”.
Haddaba Habeenkan waxa loo qariyey si dadku u dadaalaan dhamaan Tobanka danbe ee Ramadaan, gaar ahaan Habeenada kinsiga ah, sidaa ayaa Daliilku inoo sheegay, faa’iidada ku jirtaana waxay tahay in ay kala baxaan Qofka Habeenkan khayrka badan qiimaynaya iyo Qofka aan ku dadaalayn, waayo haddii la sheego Qof kastaaba intuu iska fadhiisto ayuu Habeenkan uun soo kici lahaa oo Salaatu layl isku mashquulin lahaa.
Waxa Cullimadu si aad ah isugu khilaafeen inay Habeenkan si gaar ah u tilmaamaan iyagoo daliishanaya Calaamado iyo Tirooyin Nebigu SCW si gaar ah u sheegay, khilaafkoodu wuxuu gaadhaa ilaa Afartameeyo Qawl, laakiin in Habeenkan si gaar ah loo cayimaa waa mid aan la rumaysan Karin waayo waxa la inoo sheegay in lagu qariyey Tobanka danbe, waxaana xusid mudan in aad ogaato in Habeenku guurguuro oo uu Sannadba Habeen ka galo Tobanka danbe ee Ramadaan, sidaa waxa sheegay Xaafidka Ibn Xajar Al casqalaani kitaabkiisa Fatxu Albaari [juska 4, bogga 266, Madbacada Daarul macrifa], wuxuu yidhi: Qawlka u Xooga badan waa inuu ku jiro Tobanka danbe, weliba waa inuu guurguuro, sida axaadiista laga fahmayo.
Imaamu Nawawi (Alle ha u naxriisto) isaguna wuxuu xoojiyey ama doortay inuu Habeenku guurguuro oo Sannadba Hebeen galo, laakiin Tobanka danbe ee Ramadaan ku dhex wareego. Eeg; [Fataawaha Nawawi Jusaka 1, Bogga:91, Madbacada Daarul Bashaa’ir Al islaamaiya].
Haddaba Qofka Habeenkan Illaahay waafajiyo waxa jira Duco Nebigu SCW uu Caa’isha u sheegay inay ku ducaysato:
“Caa’isha waxay tidhi, waxaan Rasuulka ku idhi: haddii aan ogaado Habeenkan maxaan ku ducaystaa?, wuxuu yidhi: Waxaad tidhaahdaa: “Illaahoow Adigu waxaad tahay Caffis badane, Caffiskana waad jeceshahay, ee I caffi”.